प्रदीप भट्टराई भन्छन्, ‘जात्रै जात्रा फागुन १७ मै आउँछ’ « Ramailo छ
प्रदीप भट्टराई भन्छन्, ‘जात्रै जात्रा फागुन १७ मै आउँछ’
महाशिवरात्रीको अवसर पार्दै अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘क्याप्टेन’ले फागुन १७ लाई आफ्नो प्रदर्शन मिति तय गरेको छ । तर यो मितिमा ‘क्याप्टेन’ भन्दा पहिल्यै फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ले प्रदर्शन मिति तोकेको थियो ।
अनमोलको ‘क्याप्टेन’ आएपछि अब के ‘जात्रै जात्रा’ फागुन १७ बाट सर्ला ? निर्देशक प्रदीप भट्टराईले तोकिएको मितिबाट पछि नहट्ने बताए । ‘हामी शत्र प्रतिशत फागुन १७ मै आउँछौं’, निर्देशक भट्टराई भन्छन् । प्रि-प्रोडक्सनको अन्तिम तयारीमा रहेको यसको निर्माण युटिलले यसै साता औपचारिक घोषणाको कार्यक्रम राख्दैछ । फिल्मको छायाँकन भने कात्तिक ११ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । रविन्द्र सिंह बानियाँ, सिंगे लामा र यादव पौडेलले निर्माण गर्ने फिल्ममा जात्रा कै बिपिन कार्की र बर्षा राउत मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैछन् ।
एकै मितिमा दुई नेपाली फिल्म लाग्नु असामान्य होइन । तर अपेक्षा गरिएका फिल्महरु सँगै लाग्नु चाहिं दुःखद कुरा हो । व्यापार र समिक्षा दुवै राम्रो पाएको जात्रा को सिक्वेल दर्शकमाझ प्रतिक्षित बन्न सक्छ भने अनमोल केसीको क्याप्टेन निर्माणदेखि नै चर्चामा छ ।
के ‘क्याप्टेन’ र ‘जात्रै जात्रा’ फागुन १७ मा सँगै लाग्लान् ? या सहकार्य गरेर फरक फरक मितिमा जान्छन् ? यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्था छ ।